Ukuhlanza of Bile: izimbangela
Namuhla sikhuluma into kubuhlungu ngempela ukuthi mhlawumbe ijwayelekile kakhulu esintwini. Lokhu Bile ukuhlanza. Izimbangela lezi zifiso kungenzeka kubangelwa inani elikhulu izifo, njengokuthi ubunjalo ezithathelwanayo, futhi pathologies ezingamahlalakhona wokugaya ukudla. Ake sihlole kubo ngokuningiliziwe.
Kungani kukhona ukuhlanza Bile: izizathu lokhu ukuqunjelwa
Njengomthetho, iyiphi ukuhlanza ngaphezu kwesikhathi esisodwa okuphindaphindiwe ivame ukuba avele uquqaba Siphuleka of Bile amanyela. Lokhu kungenxa kakhulu ngenxa yokuthi esiswini alinalutho, futhi okulandelayo nesifiso sokufuna ukumphoqa ukuba abhece out Bile. By endleleni, kulula recognize isici tinge ophuzi noma umbala ogqamile futhi ukubonakala umunyu umlomo.
Futhi ngokusekelwe lesi simanga amanga nokungenwa ubuthi, kanye ezihlukahlukene izifo emathunjini neziyaluyalu kohlelo endocrine, futhi sezinzwa uhlelo zokugula (izimila, ubuchopho ukuxukuzeka, zinhlekelele abanomfutho wegazi ophakeme, njll). Ngisho nokwesaba encane abantu abathile uhlelo ishede ezinzwa angase ukukhiqiza impendulo efanayo.
Kungani ukuhlanza Bile - ke kuba yisikhathi ikhalise i-alamu ?
Njengoba wazi, kufanele baqaphe lapho nezimpawu ezifanayo. Kungaba isibonakaliso sokuthi, isibonelo, ukuthi isiguli kakhulu wathumba "amadlozi utshwala", okwaholela ubuthi kabi umzimba. Ngo ezingamahlalakhona utshwala kwenzeka phakathi kwezinye izinto, futhi ukucasuka we esiswini, okubangela ukuhlanza Bile. Lahla lokhu kungenziwa kuphela elele drip ukusiza ihlanze umzimba ubuthi zanqwabelana futhi ezinobuthi.
Thina omama ukuhlanza ezinjalo - akuyona nje uphawu lokuziphatha ubuthi, kodwa futhi kubonisa "Ukufutheka" yizifo ezingamahlalakhona, kuba okuyinto, njengoba sazi, kaningi zenziwa nzima sokukhulelwa.
Ukuhlanza of Bile. Izimbangela - izifo zesisu
isimo ezinjalo zingakwenza ukuvimbela emathunjini amancane kubangelwa ukuvuvukala, amatshe e-Amapayipi Bile, izinqubo ezihlukahlukene ukuvuvukala. Ngokuvamile, le Bile has okwakumelwe zixutshwe okuqukethwe esiswini ukuba azibandakanye ukuwohloka kwamafutha, futhi kwephula sezwe ke uphoqelekile ukuthi kuphakamisa ukuhlanza.
Lapho esinyeni nenyongo (cholelithiasis, cholecystitis) kuvetwa izimpawu ukuhlanza of Bile, okuyinto kuhambisana ubuhlungu ngakwesokudla endaweni subcostal futhi ngezinye izikhathi isikhumba staining nabamhlophe samehlo ngombala ophuzi.
esifanayo Umbala jaundice nokuhlanza, kodwa hhayi ezihlobene nokudla, kungavela izimila kwamanyikwe. Kulokhu, lo ukuhlanza asikwazi ukumiswa, futhi engalethi impumuzo.
Peptic isilonda isifo noma yezinkinga emva kokuhlinzwa e pheshana emathunjini ngezinye izikhathi kubangele ekuqongeleleni ngokweqile Bile esiswini. Lokhu kuholela isidingo esingokwemvelo ayibulale, futhi umzimba ezimweni ezinjalo aphendule nokuhlanza.
Okufanele ukwenze uma yena vomits Bile
Nibonile nani uqobo ukuthi uma uphethwe i-ukuhlanza of Bile, kungenzeka ngezindlela ezihlukahlukene izizathu lokhu, kodwa omunye indlela yokuphuma: ukubona udokotela ngokushesha. Kuphela eyonquma ukuthi imbangela zalesi simo kanye ukwelashwa okufanele.
Uma ukuhlanza asikwazi ukumiswa, kubalulekile ukubiza i-ambulensi. Kwaze kwaba yilapho kufika wezokwelapha isiphuzo uketshezi oluningi ukuvimbela amanzi emzimbeni, futhi wamukela kungenzeka carbon yasebenza (kuyasiza ukususa ubuthi).
Izici Chevrolet Aveo T200
"Audi 80 B2": izinto ezithakazelisayo kakhulu mayelana imoto edumile German